Post byဘင်္ဂလား၊ အိန္ဒိယ on Friday, April 20,2018
၀ယ်လိုအားနည်းနေတာရယ်၊ ရူပီးဈေးအားပျော့နေတာရယ်ကြောင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာတော့ တင်ပို့ ဆန်ဈေးဟာ ဒုတိယအပတ်မြောက် ဈေးဆက်ကျနေပြီး ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဆန်ဈေးကတော့ ဆန်အ၀င်နည်းတဲ့ အတွက် တက်နေပြီး ဗီယက်နမ်ဆန်ဈေးဟာလည်း စာချုပ်အသစ်တွေ ထပ်ချုပ်လိုက်နိုင်တဲ့အတွက် ဈေးတက် လာပါတယ်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ ငါးမှတ်ဆန်တစ်တန်ဈေးဟာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂ ဒေါ်လာနှုန်းကျသွားတဲ့အတွက် အခုအခါမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၄၁၇ ကနေ ၄၂၁ ဒေါ်လာအထိသာ ရှိပါတော့တယ်။
ရူပီးဈေးကျနေတဲ့အတွက် ဆန်တင်ပို့နေတဲ့ ကုန်သွယ်တွေဟာလည်း ဈေးချပြီး တင်ပို့နေရတယ်လို့ အန်ဒရာ ပရာဒက်ရ်ှပြည်နယ် အခြေစိုက် ကုန်သည်တစ်ဦးက ပြောပါတယ်။
ရူပီးနဲ့ ဒေါ်လာငွေလဲလှယ်နှုန်းမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ဈေးဟာ ၇ လလောက်အတွင်းမှာ ပထမဆုံး အကြိမ် အမြင့်ဆုံးတက်လာပါတယ်။
ပြီးတော့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှဘက်ကနေ ဆန်ဝယ်လိုအားနည်းလာတာကလည်း အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ ဆန်တင်ပို့မှု အပေါ် သက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၇ အတွင်းက ရေကြီးလို့ သီးနှံတွေပျက်ပြီး ဆန်တွေ အများ အပြားတင်သွင်းခဲ့တဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံရဲ့ ဆန်တင်သွင်းမှုထဲမှာ အိန္ဒိယဘက်ကနေ တင်သွင်းမှုဟာ သုံးပုံ နှစ်ပုံစာ ရှိပါတယ်။
ဒီနှစ် နွေစပါးအထွက်နှုန်းဟာ တန်ချိန် ၁၉ သန်းထွက်နိုင်တယ်လို့ ခန့်မှန်းထားပြီး တစ်နှစ်ကျော် ကာလအတွင်းမှာ နွေစပါး အထွက်နှုန်း ၆ ရာခိုင်နငန်းနီးပါး တက်လာနိုင်တယ်လို့ စိုက်ပျိုးရေး ဦးစီးဌာနရဲ့ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် မိုဟာမက် မိုဆင်က ပြောပါတယ်။
တစ်ဖက်မှာ အစိုးရရဲ့ အရန်ဆန်ပမာဏမြင့်တက်လာပြီး သီးနှံတွေ စတင်ရိတ်သိမ်းကတည်းက စာချုပ် အသစ်ထပ်မချုပ်ရတော့ဘူးလို့ ကုန်သည်တစ်ဦးက ဆိုပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံမှာတော့ ငါးမှတ်ဆန်တစ်တန်ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်က တစ်တန်ကို အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၄၃၇ ကနေ ၄၃၈ ဒေါ်လာရှိနေရာက ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၄၄၅ ဒေါ်လာကနေ ၄၅၄ ဒေါ်လာအထိ ရှိလာတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
“ဒီနှစ် သီးနှံဖျက်ပိုးကြောင့် အထွက်နှုန်းလျော့သွားခဲ့တယ်။ တချို့နေရာတွေမှာဆိုရင် ဧပြီလအတွင် ခန့်မှန်းပမာဏထက် ထက်ဝက်လောက် အထွက်နှုန်းလျော့သွားခဲ့ပါတယ်။ လာမယ့်လကုန်ရင်တော့ အခြေ အနေကောင်းသွားမှာပါ”လို့ ဘန်ကောက်အခြေစိုက် ကုန်သည်တစ်ဦးက ဆိုပါတယ်။
ထိုင်းက ဆန်တန်ပို့သူများကတော့ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံနဲ့ စာချုပ်အသစ်ချုပ်ရနိုင်ချေရှိတယ်လို့ ခန့်မှန်းပြီး ဆန်တွေ ၀ယ်လောက်နေပါတယ်။
“အင်ဒိုနီးရှားအစိုးရနဲ့ စာချုပ် ချုပ်နိုင်တယ်ဆိုရင် ဆန်တန်ချိန် နှစ်သိန်း၊ သုံးသိန်းလောက် တင်ပို့ခွင့် ရနိုင်တယ်” လို့ ကုန်သည်တစ်ယောက်က ပြောပါတယ်။
လာမယ့် အပတ်တွေမှာ ဖိလစ်ပိုင်နဲ့လည်း ဆန်ရောင်းချရေး စာချုပ် ချုပ်ရနိုင်ဖွယ်ရှိတယ်လို့ ဆိုပါ တယ်။
ဒါပေမယ့် နောက်ကုန်သည်တစ်ဦးကတော့ ဈေးကွက်က နည်းနည်း လှုပ်လှုပ်ခတ်ခတ်ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
“ဆန်ဈေးတက်နေတာက စာချုပ်အသစ်တွေ ထပ်ချုပ်ရနိုင်တယ်လို့ ခန့်မှန်းထားတာတွေကြောင့် ဆန်ဈေးတက်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်” လို့ ဆိုပါတယ်။
ဗီယက်နမ်နိုင်ငံရဲ့ ငါးမှတ်ဆန်ဈေးတော့ လေးပတ်မြောက် ဆက်တက်နေပြီး ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်က တစ်တန်ကို အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၄၃၅နေ ၄၄၀ ရှိခဲ့ရာက ဒီတစ်ပတ်မှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၄၃၈ ကနေ ၄၄၀ ရှိလာပါတယ်။
“ဗီယက်နမ်က အင်ဒိုနီးရှားနဲ့ ဖိလစ်ပိုင်တို့နဲ့ စာချုပ်သစ် ချုပ်ဆိုနိုင်ဖို့လုပ်နေတဲ့အတွက် ဆန်ဈေး တက်နေပါတယ်။ ပြီးတော့ ဆောင်းစိုက်သီးနှံတွေကိုလည်း ရိတ်သိမ်းပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်” လို့ ဟိုချီမင်း အခြေစိုက် ကုန်သည်တစ်ဦးက ဆိုပါတယ်။
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံရဲ့ စားနပ်ရိက္ခာ အာဏာပိုင်အဖွဲ့ဟ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံကနေ ၂၅မှတ်တန် ဆန်တန်ချိန် နှစ်သိန်းနဲ့ ၁၅ မှတ်တန်ဆန်တန်ချိန် ငါးသောင်း စုစုပေါင်း ဆန်တန်ချိန် နှစ်သိန်းခွဲ ၀ယ်ယူတင်သွင်းဖို့ ဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာ ကမ်းလှမ်းထားပါတယ်။
ထိုကဲ့သို့ ၀ယ်ယူရေးမှာ ဖိလစ်ပိုင်အစိုးရရဲ့ အစိုးရချင်း ၀ယ်ယူရေးအစီအစဉ်ရဲ့ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။
၀ယျလိုအားနညျးနတောရယျ၊ ရူပီးစြေးအားပြော့နတောရယျကွောငျ့ အိန်ဒိယနိုငျငံမှာတော့ တငျပို့ ဆနျစြေးဟာ ဒုတိယအပတျမွောကျ စြေးဆကျကနြပွေီး ထိုငျးနိုငျငံရဲ့ဆနျစြေးကတော့ ဆနျအဝငျနညျးတဲ့ အတှကျ တကျနပွေီး ဗီယကျနမျဆနျစြေးဟာလညျး စာခြုပျအသဈတှေ ထပျခြုပျလိုကျနိုငျတဲ့အတှကျ စြေးတကျ လာပါတယျ။
အိန်ဒိယနိုငျငံရဲ့ ငါးမှတျဆနျတဈတနျစြေးဟာ အမရေိကနျဒျေါလာ ၂ ဒျေါလာနှုနျးကသြှားတဲ့အတှကျ အခုအခါမှာ အမရေိကနျဒျေါလာ ၄၁၇ ကနေ ၄၂၁ ဒျေါလာအထိသာ ရှိပါတော့တယျ။
ရူပီးစြေးကနြတေဲ့အတှကျ ဆနျတငျပို့နတေဲ့ ကုနျသှယျတှဟောလညျး စြေးခပြွီး တငျပို့နရေတယျလို့ အနျဒရာ ပရာဒကျရျှပွညျနယျ အခွစေိုကျ ကုနျသညျတဈဦးက ပွောပါတယျ။
ရူပီးနဲ့ ဒျေါလာငှလေဲလှယျနှုနျးမှာ အမရေိကနျဒျေါလာ စြေးဟာ ရ လလောကျအတှငျးမှာ ပထမဆုံး အကွိမျ အမွငျ့ဆုံးတကျလာပါတယျ။
ပွီးတော့ ဘင်ျဂလားဒရှေျ့ဘကျကနေ ဆနျဝယျလိုအားနညျးလာတာကလညျး အိန်ဒိယနိုငျငံရဲ့ ဆနျတငျပို့မှု အပျေါ သကျရောကျမှုရှိပါတယျ။ ပွီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၇ အတှငျးက ရကွေီးလို့ သီးနှံတှပေကျြပွီး ဆနျတှေ အမြား အပွားတငျသှငျးခဲ့တဲ့ ဘင်ျဂလားဒရှေျ့နိုငျငံရဲ့ ဆနျတငျသှငျးမှုထဲမှာ အိန်ဒိယဘကျကနေ တငျသှငျးမှုဟာ သုံးပုံ နှဈပုံစာ ရှိပါတယျ။
ဒီနှဈ နှစေပါးအထှကျနှုနျးဟာ တနျခြိနျ ၁၉ သနျးထှကျနိုငျတယျလို့ ခနျ့မှနျးထားပွီး တဈနှဈကြျော ကာလအတှငျးမှာ နှစေပါး အထှကျနှုနျး ၆ ရာခိုငျနငနျးနီးပါး တကျလာနိုငျတယျလို့ စိုကျပြိုးရေး ဦးစီးဌာနရဲ့ ညှနျကွားရေးမှူးခြုပျ မိုဟာမကျ မိုဆငျက ပွောပါတယျ။
တဈဖကျမှာ အစိုးရရဲ့ အရနျဆနျပမာဏမွငျ့တကျလာပွီး သီးနှံတှေ စတငျရိတျသိမျးကတညျးက စာခြုပျ အသဈထပျမခြုပျရတော့ဘူးလို့ ကုနျသညျတဈဦးက ဆိုပါတယျ။
ထိုငျးနိုငျငံမှာတော့ ငါးမှတျဆနျတဈတနျဟာ ပွီးခဲ့တဲ့အပတျက တဈတနျကို အမရေိကနျဒျေါလာ ၄၃၇ ကနေ ၄၃၈ ဒျေါလာရှိနရောက ဒီတဈပတျမှာတော့ အမရေိကနျဒျေါလာ ၄၄၅ ဒျေါလာကနေ ၄၅၄ ဒျေါလာအထိ ရှိလာတယျလို့ ဆိုပါတယျ။
“ဒီနှဈ သီးနှံဖကျြပိုးကွောငျ့ အထှကျနှုနျးလြော့သှားခဲ့တယျ။ တခြို့နရောတှမှောဆိုရငျ ဧပွီလအတှငျ ခနျ့မှနျးပမာဏထကျ ထကျဝကျလောကျ အထှကျနှုနျးလြော့သှားခဲ့ပါတယျ။ လာမယျ့လကုနျရငျတော့ အခွေ အနကေောငျးသှားမှာပါ”လို့ ဘနျကောကျအခွစေိုကျ ကုနျသညျတဈဦးက ဆိုပါတယျ။
ထိုငျးက ဆနျတနျပို့သူမြားကတော့ အငျဒိုနီးရှားနိုငျငံနဲ့ စာခြုပျအသဈခြုပျရနိုငျခရြှေိတယျလို့ ခနျ့မှနျးပွီး ဆနျတှေ ၀ယျလောကျနပေါတယျ။
“အငျဒိုနီးရှားအစိုးရနဲ့ စာခြုပျ ခြုပျနိုငျတယျဆိုရငျ ဆနျတနျခြိနျ နှဈသိနျး၊ သုံးသိနျးလောကျ တငျပို့ခှငျ့ ရနိုငျတယျ” လို့ ကုနျသညျတဈယောကျက ပွောပါတယျ။
လာမယျ့ အပတျတှမှော ဖိလဈပိုငျနဲ့လညျး ဆနျရောငျးခရြေး စာခြုပျ ခြုပျရနိုငျဖှယျရှိတယျလို့ ဆိုပါ တယျ။
ဒါပမေယျ့ နောကျကုနျသညျတဈဦးကတော့ စြေးကှကျက နညျးနညျး လှုပျလှုပျခတျခတျရှိတယျလို့ ဆိုပါတယျ။
“ဆနျစြေးတကျနတောက စာခြုပျအသဈတှေ ထပျခြုပျရနိုငျတယျလို့ ခနျ့မှနျးထားတာတှကွေောငျ့ ဆနျစြေးတကျနတော ဖွဈပါတယျ” လို့ ဆိုပါတယျ။
ဗီယကျနမျနိုငျငံရဲ့ ငါးမှတျဆနျစြေးတော့ လေးပတျမွောကျ ဆကျတကျနပွေီး ပွီးခဲ့တဲ့အပတျက တဈတနျကို အမရေိကနျဒျေါလာ ၄၃၅နေ ၄၄၀ ရှိခဲ့ရာက ဒီတဈပတျမှာ အမရေိကနျဒျေါလာ ၄၃၈ ကနေ ၄၄၀ ရှိလာပါတယျ။
“ဗီယကျနမျက အငျဒိုနီးရှားနဲ့ ဖိလဈပိုငျတို့နဲ့ စာခြုပျသဈ ခြုပျဆိုနိုငျဖို့လုပျနတေဲ့အတှကျ ဆနျစြေး တကျနပေါတယျ။ ပွီးတော့ ဆောငျးစိုကျသီးနှံတှကေိုလညျး ရိတျသိမျးပွီးသှားပွီဖွဈပါတယျ” လို့ ဟိုခြီမငျး အခွစေိုကျ ကုနျသညျတဈဦးက ဆိုပါတယျ။
ဖိလဈပိုငျနိုငျငံရဲ့ စားနပျရိက်ခာ အာဏာပိုငျအဖှဲ့ဟ ဗီယကျနမျနိုငျငံကနေ ၂၅မှတျတနျ ဆနျတနျခြိနျ နှဈသိနျးနဲ့ ၁၅ မှတျတနျဆနျတနျခြိနျ ငါးသောငျး စုစုပေါငျး ဆနျတနျခြိနျ နှဈသိနျးခှဲ ၀ယျယူတငျသှငျးဖို့ ဒီတဈပတျအတှငျးမှာ ကမျးလှမျးထားပါတယျ။
ထိုကဲ့သို့ ၀ယျယူရေးမှာ ဖိလဈပိုငျအစိုးရရဲ့ အစိုးရခငျြး ၀ယျယူရေးအစီအစဉျရဲ့ တဈစိတျတဈပိုငျး ဖွဈပါတယျ။
I'm commenting to let you know whataawesome discovery my cousin's daughter experienced reading your site. She noticed lots of things, most notably what it's like to possessamarvelous teaching character to make others smoothly master various grueling subject areas. You really surpassed our desires. I appreciate you for displaying these insightful, trusted, edifying as well as easy tips about this topic to Tanya. off white shoes
by dxilpf@gmail.com at June 09 2019
I simply had to thank you very much all over again. I'm not certain what I could possibly have made to happen without these basics discussed by you regarding such theme. Certainly was the scary circumstance for me personally, but observing this well-written tactic you treated that took me to jump for joy. I'm just happier for this support and as well , hope you comprehend what an amazing job that you are doing instructing others through your blog post. I'm certain you have never met all of us. yeezy boost 350
by sjmxzhcebq@gmail.com at June 09 2019
I needed to write you the very little observation to be able to thank you so much over again for your pleasing views you've provided in this article. It has been so seriously generous with you to supply unreservedly exactly what most of us could possibly have offered for sale for an e-book in making some dough for their own end, especially seeing that you could have done it if you wanted. The suggestions as well acted to become fantastic way to be certain that many people have similar interest the same as my own to understandalot more related to this issue. I think there are lots of more fun opportunities ahead for individuals who looked at your site. coach factory outlet
by nqtboapdnj@gmail.com at June 07 2019
I enjoy you because of your whole labor on this blog. Kim enjoys engaging in investigations and it's easy to understand why. We know all about the dynamic medium you convey very important guides through your web site and as well as increase response from some others on that idea plus our simple princess is always learningalot of things. Enjoy the rest of the new year. You have been carrying outavery good job. fitflops sale clearance
by oujdaemlupm@gmail.com at June 06 2019
I have to show some appreciation to this writer for rescuing me from this particular situation. After browsing throughout the world-wide-web and coming across techniques that were not productive, I thought my entire life was gone. Being alive without the presence of approaches to the difficulties you've solved all through your main short post isacritical case, and the ones that would have adversely damaged my entire career if I had not encountered the blog. Your own personal capability and kindness in handling every item was important. I am not sure what I would have done if I had not discovered suchasolution like this. I can also now look forward to my future. Thanks for your time so much for the professional and result oriented help. I will not be reluctant to refer your web blog to any individual who should get guidance on this matter. jordan retro
by avmltzhzgm@gmail.com at June 04 2019
I in addition to my pals came studying the best points located on your web blog and the sudden I had an awful feeling I never expressed respect to the blog owner for those techniques. These boys were definitely so very interested to see them and now have in reality been loving those things. Appreciation for genuinely simply thoughtful and also for makingachoice on some outstanding subjects millions of individuals are really eager to be informed on. Our own honest regret for not expressing gratitude to sooner. michael kors handbags
by prundj@gmail.com at June 02 2019
I'm just writing to let you know whatabrilliant encounter my friend's child had visiting your webblog. She noticed many things, which included how it is like to haveamarvelous giving mindset to let folks without problems completely graspavariety of specialized topics. You truly surpassed my desires. Thanks for providing the warm and helpful, trustworthy, informative and as well as fun tips on the topic to Evelyn. michael kors handbags
by qfwnkfqx@gmail.com at May 31 2019
I precisely wanted to say thanks all over again. I do not know the things I might have created without the actual techniques documented by you concerning my subject. It has been the frightful difficulty for me personally, nevertheless understanding the expert form you handled that forced me to jump with joy. I am thankful for this help and in addition hope you know whatapowerful job you happen to be getting into teaching other individuals all through your blog post. I know that you have never got to know all of us. kd shoes
by ofhkmvdcey@gmail.com at May 29 2019
I actually wanted to typeasmall word to be able to thank you for those marvelous points you are sharing on this site. My incredibly long internet search has finally been rewarded with wonderful facts and strategies to go over with my guests. I 'd assert that most of us visitors actually are undeniably fortunate to be inagreat community with many outstanding individuals with great techniques. I feel somewhat blessed to have discovered your web page and look forward to really more entertaining minutes reading here. Thank you once more for everything. yeezy boost 350
by pshqosmk@gmail.com at May 28 2019
I wish to show my love for your kind-heartedness giving support to women who require help on this particular issue. Your special dedication to getting the message all-around ended up being amazingly good and have constantly helped professionals much like me to arrive at their pursuits. This important advice impliesalot to me and extremely more to my office workers. Regards; from everyone of us. gucci belt [url=http://www.guccibelt.us.com]gucci belt[/url]
by emysaiarjus@gmail.com at May 27 2019